बेलायती संसद हाँक्ने संकल्प- प्रवास - कान्तिपुर समाचार
बेलायती संसद हाँक्ने संकल्प
चुनावी प्रचार प्रसारमा जुटे कैनी
जेष्ठ १, २०७४ कान्तिपुर संवाददाता
लन्डन — ८ जुनमा हुने बेलायतको संसदीय निर्वाचनका लागि लेबर पार्टीबाट छानिएका नेपाली मुलका पहिलो उम्मेदवार डा. बच्चुकैलाश कैनी यतिखेर चुनाव प्रचार प्रसारमा जुटेका छन् । गत बिहीबार उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशित भएपछि उनी मतदाता आफूतिर आकर्षित गर्न व्यस्त भएका हुन् । अन्तिम नामावली अनुसार कैनीको क्षेत्र डार्टफोर्डमा लेबर सहित पांच मुख्य पार्टीका र एक जना स्वतन्त्रउम्मेदवार चुनावीमैदानमा छन् ।
८ जुनमा हुने बेलायतको संसदीय निर्वाचनका लागि लेबर पार्टीबाट छानिएका नेपाली मुलका पहिलो उम्मेदवार डा. बच्चुकैलाश कैनी यतिखेर चुनाव प्रचार प्रसारमा जुटेका छन् । गत बिहीबार उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशित भएपछि उनी मतदाता आफूतिर आकर्षित गर्न व्यस्त भएका हुन् । अन्तिम नामावली अनुसार कैनीको क्षेत्र डार्टफोर्डमा लेबर सहित पाँच मुख्य पार्टीका र एक जना स्वतन्त्रउम्मेदवार चुनावीमैदानमा छन् ।
कैनीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका निश्चित ठाउंहरु पहिचान गरी घरदैलो अभियान थालिएको जनाए । पहिलो दिन शनिबार करिब २५ जना लेबर पार्टीका सदस्य, पदाधिकारी र स्वयंसेवक उनीसंगै घर दैलोमा व्यस्त रहे ।
कैनीले पोष्टर, पम्प्लेट, लिफ्लेट लगायत सामाग्री छपाइको अन्तिम चरणमा रहेको बताए ।डार्टफोर्ड निर्वाचन क्षेत्रमा करिब ४१ हजार घरधुरीमा रहेका ७५ हजार मतदाता समक्ष चुनाव प्रचार प्रसार सामाग्री र आफ्नो लिफलेट पोष्टबाट पुरयाउनेव्यवस्था उनले मिलाएका छन् । आगामी सातासम्म पोष्टबाट घर घरमा प्रचार सामाग्री पुगिसक्ने उनको विश्वास छ ।
लेबर पार्टीका सदस्य र स्थानीय मतदाताहरुलाई फोन बाट सम्पर्क गरेर मत दिन अनुरोध गर्ने उनले सोचेका छन् । यो कार्यक्रम चुनावको दिनसम्म निरन्तर चल्नेछ । त्यसैगरि चुनाव प्रचार गर्न रेलवे स्टेसन, अस्पताल, पार्क, विद्यालय, क्लब आदि भ्रमण गरी मतदातासंग अन्तरक्रिया गर्ने पनिउनको कार्यक्रम छ ।
सबै नेपाली समुदायको सहभागितामा मे २७ र २८ तारिख एवं जुन ३ र ४ तारिखका दिन लिफलेट बांड्ने उनले बताए । चुनावका दिन जुन ८ माउल्लेख्य स्वयंसेवक र पार्टी सदस्यहरु सहभागी गराई हरेक मतदातालाई भोट हाल्न अनुरोध गरिने कैनीले बताए ।
कैनीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा विशेष गरी अस्पताल र स्कुलमा भएको बजेट कटौतीको असर कम गर्दै सेवा सुधार गर्ने, स्थानीय स्तरमा पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिने, वायु प्रदुषण न्यूनीकरण योजना ल्याउने, सडक जाम हटाउन काम गर्ने, स्थानीय टाउन सेन्टर आकर्षक बनाउने, व्यापार ब्यवसायकालागि आकर्षक योजना ल्याउने आदि मुख्य चुनावी मुद्दा अघि सारेका छन् ।
सत्तारुढ कन्जरभेटिभको पकड क्षेत्रबाट लडेका कैनीलाई चुनाव जितिनेमा पूर्ण विश्वास छ । ‘चुनाव जित्न पक्कै चुनौतीपूर्ण छ तर असम्भव छैन् । म चुनाव जित्ने कुरामा विश्वस्त छु’, उनले भने, ‘मेरो चुनाव जित्ने आधार भनेको मैले केहि वर्षदेखि स्थानीय निकायमा रहेर गरेको काम, स्थानीय जनतासँग घुलमेल हुन सक्ने क्षमता, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा मेरो विशेष अनुभव र कार्यकर्ता परिचालन हो ।’
चुनावका लागि कम्तीमा दुई तीन हप्ता छुट्टी लिने उनको योजना छ । यदि उनले चुनाव जिते भने अर्को दिन देखि संसद भवन छिर्छन्नत्र हारेको खण्डमा चुनावपछि फेरि जागिरमा फर्कने उनले सुनाए ।
संसदीय चुनाव प्रचारका लागि नेपालमा भाषण गर्ने प्रचलन हुन्छ । तर, बेलायतमा शान्त वातावरणमा हल्ला नगरी चुनाव गरिन्छ । कुनै सार्वजनिक ठाउँमा पोष्टर पम्प्लेट राख्न मनाही हुन्छ ।
कसैलाई आफ्नो घरमा पम्प्लेट राख्न भने छुट छ ।
प्रकाशित : जेष्ठ १, २०७४ ०९:३७
बाँफिकोट र सानीभेरी १ मा माओवादी केन्द्र विजयी
जेष्ठ १, २०७४ हरि गौतम
रुकुम — बाँफिकोट गाउँपालिका–१, को वडा अध्यक्षमा नेकपा माओवादी केन्द्रका हर्कु मल्ल विजयी भएका छन् ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नयाँ शक्ति पार्टी नेपालको सयुंक्त प्यानलका कर्णबहादुर मल्ललाई ५० मतले पराजित गर्दै हर्कु विजयी भएका हुन् । ४ सय ४४ मत खसेकोमा उनको पक्षमा २ सय १८ मत आएको छ भने उनका प्रतिद्धन्दी सयुंक्त प्यानलका कर्णबहादुर मल्लले १ सय ६८ मत पाएका छन् । उक्त वडाको अन्य ३ सदस्यमा पनि माओवादी केन्द्रकै उम्मेवदर विजयी बनेका छन् । दलित महिला सदस्यमा बुदी कामी, अन्य सदस्यमा काले कामी र बलबहादुर जैसीले चुनाव जितेका छन् ।
महिला सदस्यमा भने नेपाली कांग्रेसकी तुली गिरी यस अघि नै निर्विरोध निर्वाचित भएकी थिइन् । उक्त गाउँपालिकाको अध्यक्ष उपाध्यक्षमा पनि माओवादी केन्द्रका उम्मेदवारहरुले अग्रता कायम गरेका छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्षका उम्मेदवार धर्मबहादुर केसीले २ सय १८, उपाध्यक्ष मनकला पुनले २ सय १४ मत पाएका छन् भने नेपाली कांग्रेस र एमाले गठबन्धनको तर्फबाट अध्यक्ष जनककुमार वाँठाले १ सय ६८ र उपाध्यक्ष व्यूझना पुनले २३ मत ल्याएका छन् । अहिले २ नम्वर वडाको मत गणना कार्य चलिरहेको छ ।
यसैगरी सानीभेरी गाउँपालिका–१, मा पनि नेकपा माओवादी केन्द्रको प्यानल विजयी बनेको छ । वडा अध्यक्षका उम्मेदवार टेकबहादुर पुन सहित अन्य ४ जना सदस्य पनि माओवादी केन्द्रले जितेको छ । ६ सय ७२ मत खसेकमा टेकबहादुर पुनले ४ सय २८ ल्याएका छन् भने उनका प्रतिद्धन्दी नेपाली कांग्रेसका खलबहादुर पुनले १ सय ७२ मत पाएका छन् ।
आइतबार भएको ६ स्थानीय तहमध्य बाँफिकोट, त्रिवेणि गाउँपालिका र मुसीकोट नगरपालिकाको निर्वाचनको मत आइतबार रातीबाटै मत गणना भैरहेको छ भने अन्यमा आजबाट मत गणना सुरु गर्ने भएका छन् । चौरजहारी नगरपालिकाको विहानबाट सुरु भैसकेको छ भने त्रिवेणि गाउँपालिका र आठविसकोट नगरपालिकामा भने मत गणना गर्ने गरी राजनीतिक दल छलफलमा जुटेका छन् ।
मुसीकोट नगरपालिकाको पछिल्लो मत परिणाम अनुसार नगर प्रमुखमा नेपाली कांग्रेसका महेन्द्र केसीले अग्रता कायम गरेका छन् । महेन्द्र केसीको ३ सय ९७ छ भने नेकपा माओवाद केन्द्रका देवीलाल गौतमको २ सय २७ र नेकपा एमालेका विमलकुमार पुनको पक्षमा ९६ मत खसेको छ ।
अपांगता सुन्दरीको कारुणिक कथा
दुवै खुट्टा गुमाएका पूर्व गोर्खा सगरमाथा चढ्न पाएर दंग
अस्ट्रेलियामा नयाँ भिसा प्रक्रिया सुरु
कोरियामा नेपाली कामदारको सुतेकै अवस्थामा मृत्यु
इण्डोनेसियाली युवतीको हत्या प्रकरण : मलेसियाली प्रहरीको खोजी सूचीमा नेपाली युवा